February 17, 2009, 8:32 am
Comment by MANORHARY February 18, 2009 @ 2:45 am
Comment by မီးငယ် February 18, 2009 @ 6:23 am
အပြန်အလှန် လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးကြတာ ကြည်နူးစရာပါပဲ ။ ကြည်နူးစရာ နေ့ ရက်တွေကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်း-)
Comment by ကောင်းကင်ကို February 18, 2009 @ 7:05 am
ညီမလေး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ရွှင်နေကြတာ ကြည်နူးစရာ။ အားတောင်ကျသွားတယ်။ 😛 ချစ်သူများနေ့လက်ဆောင်ဆိုတာ တစ်ခါပဲရဖူးတယ်။ တန်ဖိုးမထားခဲ့မိဘူး။ မနှစ်ကချစ်သူများနေ့မှာ အနီးအနားက ကလေးတွေကိုချောကလက်ဝယ်ကျွေးဖြစ်တယ်။ ဒါလောက်ပဲ။ ချစ်သူများနေ့က အစ်မအတွက်တော့ သိပ်မထူးခြားဘူး။ သူများတွေ ပျော်နေကြတာပဲကြည့်ပြီး မုဒိတာပွားရတယ်။
Comment by မေ့သမီး February 19, 2009 @ 5:59 am
ညီမလေးပျော်နေတာကိုပဲ မုဒိတာပွားသွားပါတယ်။ အစ်မတို့အတွက်ကတော့ ဘာမှမဆိုင်သလိုပါပဲ 😛
Comment by GreenGirl February 21, 2009 @ 3:16 am
ညီမတော်ဆီ အခစားရောက်သွားပါကြောင်း။ 😀
Comment by ကလိုစေးထူး February 21, 2009 @ 6:01 am
မင်္ဂလာပါ အမရေ ။ အစအစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ။
Comment by Aung Phyoe February 22, 2009 @ 7:06 am
လင်လက် ရေ အမစာဝင်ရေးတိုင်အဆင်မပြေဘူး ခုကော
Comment by မေအိခင် (လယ်ဝေး) February 25, 2009 @ 7:02 pm
Nyi Ma Lin let,
Whatalovely life? I am so glad for both of you.
Comment by Wunna March 2, 2009 @ 1:11 pm
Comment by Wunna March 2, 2009 @ 1:12 pm
အမရေ… အိမ်ထောင်ကျသွားတာနဲ့ ဘလော့ဂ်လေးလည်း အဆုံးသတ် သွားတော့တာပဲနော်…
Comment by Fat Punk March 17, 2009 @ 1:06 pm
လာလည်သွားတယ် ညီမရေ http://www.nyinyimyanmar.co.cc/
Comment by Nyi Nyi Myanmar March 22, 2009 @ 3:13 am
ညီမလေး ပျောက်နေတာကြာပြီ။ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေ…
Comment by GreenGirl March 26, 2009 @ 2:09 pm
Comment by Phyo Maw April 5, 2009 @ 4:27 am
ဘ၀မှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ. သို့သော် လောကဓံဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ လောကဓံနဲ့ ကြူံတွေ့တဲ့အခါ အချစ်ဟာ အားဖြစ်ပါစေ။ဘေးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ လောကဓံနဲ့ကြုံတဲ့အခါ အချစ်ကို ပျော်စရာ သာဖြစ်ပါစေ။ စိတ်ညစ်စရာမဖြစ်ပါနဲ့။ လူသားအားလုံး လောကဓံနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရတာပဲ။ ဒါကြောင့် လောကဓံကို ကြံကြံ့ ခံနိုင်တဲ့ အချစ်မှသာ အချသ်စစ် မည်တာပါ။ချသ်သူတိုင်းပေါင်းကြပါစေ။ အချစ်စစ် တွေခိုင်မြဲပါစေ။
Comment by ၀ိုင်းရတနာ November 30, 2009 @ 2:17 am